Sakana amin’ny famatsiam-bola :: Mitaraina ireo orinasa amin’ny taozava-baventy • AoRaha
Sakana amin’ny famatsiam-bola Mitaraina ireo orinasa amin’ny taozava-baventy
Mamboraka ny olana ateraky ny fidangan’ny vola mivoaka aminy ireo mpisehatra amin’ny fandraharahana momba ny taozava-baventy. Nambaran’ny Sendikan’ny orinasa miasa amin’io sehatry io na ny SEBTP fa lany amin’ ny fameranana ny vola amin’ ny banky avokoa ny tombony azon’izy ireo, ka maro ny orinasa no mikatona satria tsy manana antoka intsony. “Sahirana ireo orinasa, noho ny tahan’ny zana-bola alain’ny banky mahatratra hatramin’ny 20%”, hoy ny fana-zavan’ny filohan’ny sendika.
“Tsy manana orinasa lehibe miara-miasa aminy any ivelany ka mandefa vola ho azy ireo anefa ny orinasa mikirakira ny lafiny taozava-baventy ”, hoy i Hary Andriatefihasina, filohan’ny SEBTP nandritra ny atrikasa notanterahina teny Ankorondrano. Niarahan’ireo orinasa misehatra amin’ny taozava-baventy sy ny banky mba hikarohana vahaolana amin’ny famatsiam-bolan’ireo orinasa ireo izany fivoriana izany.
Anisan’ny fangatahan’ ny sendika ny fanafohezana ny fe-potoana hanaovana ny fangatahana findramam-bola satria mahatonga ny sazy ho an’ny orinasa efa nahazo asa ny fahataran’ny fanombohana izany. Nanambara kosa ny tompon’ andraikitra amin’ny banky iray fa: “ ambony tokoa ny zana-bola ary tsy maintsy misy pitsopitsony maro tsy maintsy jeren’ny banky alohan’ ny hanomezana ny lelavola ampindramina, toy ny fanombanana raha haha- tafaverina ny vola nindraminy ny orinasa iray na tsia mba hisorohana amin’ny tsy fiverenan’ny vola intsony”.
Fandriampahalemana :: Nanome fitaovana ny Pnud
Kapoka sy herisetra :: Namoy ny ainy ilay zazavavikely voadaroka